२ call सुलेख फन्ट | क्रिएटिव अनलाइन
कार्लोस सान्चेज | | Fuentes, सामान्य, पुनरावृत्त
हस्तलिखित फन्टहरू धेरै ग्राफिक परियोजनाहरूका लागि एक धेरै उपयुक्त संसाधन हुन्। जे होस्, तिनीहरूको पनि कमी छ के कारणहरू र परिस्थितिहरूको आधारमा तिनीहरूलाई कम सिफारिश बनाउँछ। धेरै ग्राफिक डिजाइनरहरू तिनीहरूलाई प्रायः बेवास्ता गर्ने निर्णय गर्छन् किनभने उनीहरूको सन्देशहरू प्रसारित गर्न गाह्रो हुने निश्चित डरको कारण। तिनीहरू कुनै कारण बिना नै छैनन्, र यो यो हो कि यी प्रकारका फन्टहरू प्रायः स्पष्ट तरिकामा प्रदान गर्दछन्, पढ्न योग्यताको सर्तमा धेरै समस्याहरू। यद्यपि यो सत्य हो कि ती सबैजनाले यो समस्या उत्पन्न गर्दैनन्, वा कम्तिमा एकै डिग्रीमा गर्दैनन्, यो सँधै सुविधाजनक हुन्छ जुन हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ। होशियार रहनुहोस् हाम्रो डिजाइनमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दा। यदि तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ भने यो हो किनकि तपाईं निश्चित रूपमा उनीहरूलाई प्रोजेक्टमा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट, म तपाईंलाई काममा तल झर्न प्रोत्साहित गर्दछु, यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले काममा जानुभन्दा पहिले तपाईंको दिमागमा केहि चीजहरू छन्।
आज हामी हस्तलेखन फन्टहरूको एक धेरै उपयोगी प्याकेज प्रस्तुत गर्दछौं र तिनीहरूलाई अधिकतम बनाउनको लागि सानो गाइड। किनभने ती निश्चित रूपमा जानकारीको प्रसारणमा हस्तक्षेप नगरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र हाम्रो डिजाइनहरू र अवधारणाहरूलाई थप मूल्य प्रदान गर्न सक्दछन्। सुरुबाट सुरू गरौं!
1 पढ्न योग्यको को मुद्दा
2 ईटालिक हस्तलेखनको पर्यायवाची छैन
3 स्टाफ ब्रान्डिंगको साथ सम्बन्ध
4 हस्तलेखन फन्ट र जोड सिर्जना
5 सजावटी तत्वहरूको रूपमा हस्तलिखित फन्टहरू
6 मुख्य सुझावहरू
पढ्न योग्यको को मुद्दा
यदि स्रोतहरूको यी प्रकारहरू केहि द्वारा चित्रित छन्, यो किनभने तिनीहरू हो केही अधिक जटिल स्रोतहरु को बाकी भन्दा। यसले केही समस्याहरू निम्त्याउँदछ किनकि तिनीहरूलाई धैर्यतापूर्वक सामग्री पढ्नको लागि अधिक ध्यान र एकाग्रता आवश्यक छ। पत्रहरू अरूसँग भ्रममा परेका हुन्छन् र यस्ता प्रकारका समस्याहरूले पाठकलाई सन्देशमा चासो लिन छोड्दछ र त्यसैले हाम्रो डिजाइनको आकर्षण कम हुन्छ। यी मुख्य कारणहरू हुन् कि यी प्रकारका फन्टहरू नियमित रूपमा र थोरै रूपमा डिजाइनर समुदायको बीचमा प्रयोग गरिन्छ। यसैले तिनीहरू कुनै तरिकाले केवल सजावटी विमानमा र रचनामा धेरै कम तरिकामा relegated छन्। यद्यपि हामी यी केसहरूमा यसको कार्यको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। जब हस्तलिखित फन्टलाई सजावटी पूरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसले सन्देश र हाम्रो डिजाइनको पछाडि अवधारणालाई पनि समर्थन गर्दछ, वास्तवमा यसको दोहोरो उद्देश्य छ: सजावटी र अर्कोतर्फ संचारात्मक। यो महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाईं यी प्रकारका स्रोतहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाईंले कहिले पनि मोडरेटको दृष्टि गुमाउनु हुने छैन। हामीले यसको प्रयोग डोज गर्न सिक्नुपर्दछ र जब हामी यसलाई प्रयोग गर्छौं, हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि हाम्रो फन्ट डिजाईनले चाहेको सन्देशको साथ पूर्ण रूपमा प al्क्तिबद्ध हुनुपर्छ। हामी केवल केहि निश्चित पठनीयता र फ्लुनेसी समस्याहरू जोगिनका लागि गर्छौं, तर यो पनि हो कि हस्तलिखित फन्टमा पाठकलाई समात्न र उनीहरूको ध्यान खिच्न सक्ने क्षमता वा क्षमता हुन्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाईं आफ्नो डिजाइन भर यी प्रकारका फन्टहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, हस्तलिपि फन्टले सन्तुलनबाट सबै शक्ति गुमाउनेछ। एकचोटि यो शब्द र हरेक एक शब्दमा देखा पर्छ कि रचना बनाउँछ, तिनीहरूले कुनै बल वा पाठक संग हुक हुनेछ। जे भए पनि, तिनीहरू प्रभाव पार्न वा प्रयोगकर्ताको ध्यान रोक्न सक्षम हुने छैनन्।
ईटालिक हस्तलेखनको पर्यायवाची छैन
लगभग मिथक जस्तो, हस्तलिखित फन्टको अवधारणा सधैं मानसिक रूपमा इटालिकसँग सम्बन्धित छ। यो अनौठो होइन कि यो भएको हो, हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि त्यहाँ धेरै संख्यामा हस्तलिखित फन्टहरू छन् जुन एकै समयमा इटालिक हुने विशेषताहरू छन्। यद्यपि यो पाण्डुलिपि अवधारणाको अन्तर्निहित सुविधा होइन। सबै हस्तलिखित फन्टहरू अभिशाप हुन्, करीव पनि होइनन्। यस प्रकारको फन्टको मुख्य विशेषता यो हो कि यसको नामले सुझाव दिन्छ कि यो देखिन्छ हस्तनिर्मित। सबै अक्षरहरू जुन हातले बनाएको हो सराईक हो, हैन? यो समय हो तपाईंले दुबै अवधारणाहरू छुट्याउन सिक्नको लागि। वास्तविकतामा, हस्तलेखन फन्टहरूमा सुविधाहरू र उपस्थितिहरूको एक विशाल विविधता हुन सक्छ, त्यसैले इटालिक प्रयोग गर्नु भन्दा बढी विकल्पहरू छन्। तपाईंले सबैभन्दा उपयुक्त छनौट गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। स्रोतहरूको विशाल बैंकको विश्लेषण गर्नुहोस् र उनीहरूलाई पहिचान गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईंको व्यवसायमा उस्तै प्रवृत्ति साझा गर्दछन्। तर कृपया फन्टहरू छनौट नगर्नुहोस् जसको मुख्य विशेषता ईटालिक्स हो। खोज्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् अधिक संभावना र प्रजातिहरू राम्रो। जब हामी यी प्रकारका स्रोतहरूतर्फ फर्कन्छौं, यो किनभने हामीले हाम्रो दृश्य प्रवचनमा थोरै "मानवता" लागू गर्नुपर्दछ। तपाईं यस विकल्पलाई विभिन्न विकल्पहरूबाट फेला पार्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, निश्चित रूप से दृश्य गन्दा एक फन्ट तपाइँको परियोजना को लागी धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। तपाईंको कम्पोजिटलाई स्रोतहरूको माध्यमबाट अराजकताको एक निश्चित खुराक आवश्यक पर्दछ र त्यसैले यसले भाषणलाई निकटता, मानवता र ईमानदारीको साथ प्रदान गर्दछ। इटालिक क्याटलग भित्र प्रस्तावित धेरै फन्टहरू उनीहरूलाई आकर्षित गरेको उपकरणको प्रकारमा फरक हुन्छन्: एक पेन्सिल, कलम, एउटा मार्कर ... तपाइँको परियोजनाहरूमा यसलाई लागू गर्न यस सुविधाको विश्लेषण पनि एकदम चाखलाग्दो हुन सक्छ। जति धेरै तपाईंले देख्नुहुन्छ, उनीहरूको बारेमा तपाईंको ज्ञानको डिग्री जति बढि छ र तपाईं अधिक भिन्नताहरू पाउनुहुनेछ। ध्यान दिएर जानु पर्ने जस्तो देखिएको तर यसको बावजुद महत्त्वपूर्ण फरक पार्छ।
स्टाफ ब्रान्डिंगको साथ सम्बन्ध
हस्तलिखित फन्ट व्यक्तिगत ब्रांड वा व्यक्तिगत ब्रान्डि theको वातावरणमा अधिक र अधिक प्रयोग गरिन्छ। कारण धेरै सरल छ, र के ती यी प्रकारका पत्रहरूले न्यानोपन, घनिष्ठता र घनिष्ठताको भावना प्रस्ताव गर्छन्। तिनीहरू सुझाव दिन सक्षम छन् कि पछाडि व्यक्तिको व्यक्तित्वले लोगो कस्तो हुन्छ भन्यो। यसैकारण यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले चयन र परीक्षण चरणमा विस्तार गर्न चाहनुहुने लक्षणहरू ध्यानमा राख्नुहोस्। तपाईं आफ्नो ब्रान्डको मुख्य सुविधाहरू पहिचान गर्न सक्षम हुनुपर्दछ र प्रयोग गर्न फन्टमा फेला पार्नुहोस्। यसको लागि केही संवेदनशीलता आवश्यक छ तर अत्यन्त प्रभावकारी छ। त्यहाँ एक विन्दु छ जुन तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ, र त्यो हो तपाईंले जस्तो हस्तलिपि फन्ट प्रयोग गर्नु हुँदैन। बैंकबाट सीधै लिइएको फन्टको प्रयोग अव्यवसायिक र पनि स्वचालित हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यसमा तपाईंको व्यक्तित्व र रचनात्मकताको केही राख्न सिक्नुभयो। यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्, तपाईंको काम गर्ने टाइपफेसको आधारमा आफ्नै सुविधाहरू विकास गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई अलि टाढा राख्नु पर्छ, किनभने यदि तपाईं यो असंगत रूपमा गर्नुहुन्छ भने तपाईं पढ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने जोखिमलाई चलाउनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग टाइपोग्राफर भाँडा लिने अवसर छ भने कस्टम फन्ट अधिक राम्रो हुन्छ, यद्यपि सबैसँग सम्भावना हुँदैन। विशेष गरी जब हामी व्यापार वा ब्रान्डको विकासको पहिलो चरणहरूमा सामना गरिरहेका छौं। यदि तपाइँ यस संसारको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ टाइपोग्राफी तपाईं आफ्नो ब्रान्डको आवश्यकताको आधारमा तपाईंको आफ्नै फन्ट डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। यसभन्दा पहिले तपाईले एक शक्तिशाली अवधारणा डिजाइन बनाउनु पर्छ र निश्चित रूपमा तपाईलाई मनपर्दो धेरै फन्टहरूको विश्लेषण गर्नुपर्दछ। तपाईं आफ्नै क्यालिग्राफी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कलम र कागज चाहिन्छ, शब्द लेख्नुहोस् जुन तपाई आफ्नो व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्न चाहानुहुन्छ र यसलाई स्क्यान गर्नुहोस्। तपाईं त्यसपछि यो रेखाचित्र र फन्ट डिजाइन मा विशेषज्ञता प्राप्त प्रोग्रामको साथ डिजिटल काम गर्न सक्नुहुनेछ।
हस्तलेखन फन्ट र जोड सिर्जना
संरचनामा जोर वा जोरको रूपमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्षम हुन विभिन्न रणनीति र प्रविधिहरू छन्। यी रणनीतिहरूको बीचमा हामी र find भेट्छौं। अक्षको रूपमा हामी यसको प्रयोग गर्छौं रंगहरू कर्पोरेट र हामी केहि क्षेत्रहरूमा टोन परिवर्तन गर्दछौं ताकि यस प्रकारले एक एसिन्क्रोनी हुन्छ र सन्देशले शक्ति र जीवन शक्ति प्राप्त गर्दछ। यी रणनीति को अर्को मा आधारित छ आकार। यो तत्वको आकार परिमार्जन गर्न पर्याप्त हुन्छ जुन संरचनाको अंश हो, यस तरिकाले हामी ताललाई तोड्दछौं। बरु, हामी विरोधाभासपूर्ण पूरै अझ सुमधुर बनाउँछ कि संगति संग एक ब्रेक बाट ताल सिर्जना गर्नेछौं। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, यी सबै आन्दोलनहरूको आधारभूत सिद्धान्त उस्तै हो: ध्यान खिच्नुहोस् र कुनै प्रकारले अवधारणागत र दृश्य दृश्यक्रम स्थापना गर्दछ जसले पाठकलाई केही तत्वहरूमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ। यो लक्षित रणनीतिबाट यो हाम्रो लागि धेरै सजिलो हुनेछ «ह्यान्डल»जानकारी, यससँग खेल्नुहोस् र अधिक शक्तिशाली र प्रेरणादायक बोली निर्माण गर्नुहोस्। कुनै पनि दृश्य प्रवचनको मुख्य उद्देश्य भनेको दर्शकको स्मृतिमा इम्बेड हुनु हो। यस तरिकाले हामी उहाँसँग एक सम्बन्ध सिर्जना गर्न निश्चित गर्नेछौं र त्यसैले हाम्रो ब्रान्डसँग एक प्रतिस्पर्धा। टाइपोग्राफी अपवाद छैन र त्यसैले यो रणनीतिबाट उम्कन सक्दैन। हामी दर्शकमा दृश्य प्रभाव प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारका फन्टहरू प्रयोग गर्न सक्छौं, वा कहिलेकाँहि फरक शैलीहरू (बोल्ड, इटालिक ...) को साथ समान टाइपफेस प्रयोग गर्न मात्र पर्याप्त हुन्छ। यद्यपि धेरै डिजाइनरहरू यस प्राविधिकबाट टाढा रहने निर्णय गर्छन्। जबकि यो सत्य हो कि दुई फरक स्रोतहरू संयोजन गर्न निश्चित स्वाद र संवेदनशीलता हुनु आवश्यक छ। जे भए पनि, कि त यो प्राविधिक दुरुपयोग गर्न उचित छैन फन्टबाट। यो सिफारिश गरिएको छ कि अधिकतम तीन बिभिन्न फन्टहरू एकल डिजाइनमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो रणनीति मास्टर गर्न तपाईंलाई केही अभ्यासको आवश्यक पर्दछ। यहाँबाट म तपाईंलाई प्रयोग गरी आमन्त्रित गर्छु।
सजावटी तत्वहरूको रूपमा हस्तलिखित फन्टहरू
यस प्रकारको फन्टको सब भन्दा उल्लेखनीय विशेषताहरू मध्ये एक रेखाको वक्रता, भोल्यूमहरूको अनियमितता र निश्चित रूपले गोल र सुरुचिपूर्ण आकारहरूको स्थिर उपस्थिति हो। यी कारणहरूको लागि, एउटा हस्तलेखन फन्ट डिजाइन गर्न सकिन्छ र योबाट विकास गर्न उपयुक्त छ, सजावटी तत्त्व जुन लोगो वा संरचना पूरक हुन्छ। यद्यपि यो धेरै सामान्य छैन, यो एक रणनीति बन्न सक्छ जसले ताजापन, रमणीयता र रचनालाई लालित्य प्रदान गर्दछ।
तिनीहरूलाई पाठको विशाल समूहको लागि प्रयोग नगर्नुहोस्: हस्तलिखित अक्षरहरू भ्रमित गर्न र मर्ज गर्न सजिलो छ, त्यसैले यो आवश्यक छ कि हामीले उनीहरूको पाठको ठूलो समूहमा उनीहरूको प्रयोग गर्नबाट पहिले जोगिनु आवश्यक छ। हामीले यसको प्रयोगलाई असाधारण केसहरूमा वा कम क्षेत्रहरूमा कम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। अन्यथा तिनीहरूले प्रभाव गुमाउँछन् र हुनसक्छ पाठ हुन आमन्त्रित गर्दैन। यो अधिक सिफारिश गरिएको छ कि हामी यस प्रकारको फन्टहरूलाई कम वाक्यांशहरूमा छुट्याउँदछौं, कहिलेकाँही कुञ्जी शब्द हाईलाइट गर्ने (कहिलेकाँही अक्षर पनि) पर्याप्त हुन्छ र यसको प्रभाव धेरै हडताल, सुवाच्य र प्रभावकारी हुन्छ।
पृष्ठभूमि र पाठ कन्ट्रास्ट: हामीले विरोधाभासहरूको ख्याल गर्न सिक्नुपर्दछ। विशेष गरी अक्षर र पृष्ठभूमि को टोन संग खेल्न। सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि क्षेत्रहरू वा पाठ ड्रयरहरूमा त्यहाँ एक समान वा कम्तिमा अर्ध पारदर्शी रंग हुन्छ। यदि पृष्ठभूमि एक तस्वीर बाट बनेको छ भने, यो सिफारिश छ कि हामी लागी सुधार्न को लागी एक प्रकारको धब्बा लागू गर्न को लागी कोशिश गर्नु यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि एक फोटो धेरै अनियमित छ र यसको शेडहरू लगभग दुर्घटनामा धेरै कन्ट्रास्ट र कम क्षेत्रमा वितरित हुन्छन् र प्रकाशको साथ पनि हुन्छ। तसर्थ, तपाईंले सहि टोनिलिटी, प्रकाश र पृष्ठभूमि पनि के छनौट गर्नुपर्दछ।
साइज: तपाईंले आफ्नो हस्तलिखित फन्ट आयामहरू दिन चाहानुहुन्छ जुन मध्यम आकार र ठूलो बीचको हुन्छ। यसले दर्शकको लागि पढ्न धेरै सजिलो बनाउँदछ र यो दृश्य र छोटो समयमै धेरै भिन्न हुनेछ।
स्टक लिनुहोस्, के यो लायक छ? : हस्तलिखित फन्टहरू समावेश सहित प्रभावको एक श्रृंखला छ र ठाउँको क्रम र व्यवस्थामा साथै र colorsहरूको प्रयोगमा सर्तहरूको एक श्रृंखला समावेश गर्दछ। त्यहाँ धेरै पटकहरू छन् जब हामीले कुनै कम्पोजिसन सक्यौं जुन एकदम राम्रो देखिन्थ्यो, हामीले निर्णय गर्‍यौं कि यो हस्तलिखित फन्ट समावेश गर्नु राम्रो विचार हो। समस्या यो हो कि हाम्रोलागि रोचक फन्ट समावेश गरेर हामी यो देख्न थाल्छौं कि यो हामीले सोचेजस्तो सौन्दर्य वा सुहाउँदो छैन। त्यस पछि हामी अघिल्ला बिन्दुहरूमा उल्लिखित रणनीतिहरू लागू गर्न थाल्छौं तर हामी बुझ्छौं कि हामीले सम्पूर्ण संरचनालाई पुन: संरचना गर्नुपर्दछ। यी अवस्थाहरूमा के यो लाभदायक छ? सबै भन्दा माथि, यसको हामीले विकास गरेको अवधारणागत डिजाइनसँग जडान हुनै पर्छ। यी केसहरूमा यो बिल्कुल अप्रासंगिक छ कि यसको सौंदर्यशास्त्र "हामीलाई मनपर्दछ"। यदि यसले हामीलाई हाम्रो डिजाइनको अर्थबाट टाढा राख्छ भने हामीले विचार त्याग्नु पर्छ।
रंग सन्तुलन, संयोजन: यदि हामी हस्तलिपि फन्टलाई अन्य प्रकारका फन्टहरूसँग वैकल्पिक गर्दछौं भने हामीले रंग तहमा खेल्न पनि सिक्नुपर्दछ। हामी क्रोमेटिक कन्ट्रास्टको साथ फन्टको परिवर्तनमा यस भिन्नतालाई रेखांकित गर्न सक्दछौं, र साइज वा फन्ट शैलीको स्तरमा पनि यसको विपरितका साथ। यदि हामी हाम्रो कम्पनीको कर्पोरेट र colorsहरूसँग खेल्न सक्दछौं वा तिनीहरूलाई वैकल्पिक रूपमा उदाहरणको लागि विज्ञापन पोस्टरमा काम गर्न वा नारालाई प्रभाव पार्न, परिणाम सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ।
यदि तपाईले खोज्नु भएको परिणाम के हो भन्नेमा तपाईलाई श have्का लाग्छ भने, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाई बिभिन्न तत्वहरु संग बिभिन्न रचनात्मक लाइनहरु र रचनात्मक प्रक्रियाहरु विकास गर्न कोशिस गर्नुहोस्। यदि तपाईं तेस्रो पक्षको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले विभिन्न सूत्रहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई वा तपाईंको ग्राहकलाई आकर्षित गर्दछ। यी अवस्थाहरूमा अलि बढी गहन विश्लेषणको सहारा लिनु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। विशेष गरी यदि हामी लोगो वा व्यवसायको कर्पोरेट पहिचानको केहि तत्वमा काम गर्दैछौं। रिसोर्ट गर्न विज्ञापन ग्राफोलजी यो हामीले खोजिरहेका उत्तरहरू प्राप्त गर्न राम्रो तरिका हुन सक्छ। हामी भविष्यको समर्थनमा तिनीहरू प्रत्येक डिजाइनलाई लागू गर्न सक्दछौं जुन उनीहरूले अधिकार गर्नेछन् र यस प्रकारले उनीहरूको कार्यक्षमता र कुन समाधान समाधानको लागि अधिक व्यावहारिक छ सेटमा सेटको आधारमा निर्णय गर्नुहोस्। साना सतहहरू वा आयामहरूमा रोप्दा अधिक जटिल लोगोहरू अधिक समस्याग्रस्त हुन्छन्। तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि यो सुवाच्य र सजीलो चिन्न योग्य छ।
एक निष्कर्षको रूपमा, तपाईंले दिमागमा लिनुपर्दछ कि हस्तलिखित टाइपफेस प्रस्तुत गर्न सकिन्छ बिभिन्न प्रकारहरु र प्रजातिहरू ताकि यो विभिन्न प्रकारका परियोजनाहरूमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। हस्तलिखित टाइपोग्राफी ग्राफिक डिजाइन प्रोजेक्टहरू, सम्पादकीय डिजाइन, वेब डिजाइन र अडियोभिजुअल परियोजनाहरूमा अधिक प्रयोग गरिन्छ। जब यी समाधानहरूको बारेमा निर्णय लिनुहुन्छ, तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि त्यहाँ केही सर्तहरू वा पोइन्टहरू हुनेछन् जुन ध्यानमा राख्नुहोस् ताकि यो तपाईंको कम्पोजिटले पूर्णरुपमा मिल्छ। अब हामी तपाइँ संग एक सानो साझा गर्नेछौं फन्टको चयन सबै भन्दा आकर्षक र सबै भन्दा राम्रो यो हो कि तिनीहरू नि: शुल्क उपलब्ध छन्।
यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईंसँग केहि स्रोत बैंकहरू उपलब्ध छन् र नियमित रूपमा तिनीहरू पहुँच गर्नुहोस्। राम्रो उदाहरण स्क्वायरल फन्ट, गुगल फन्ट वा यस्तै हो। सामान्यतया, यी प्रकारका बै in्कहरूमा तपाईं सजिलैसँग यी प्रकारका स्रोतहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ किनभने तिनीहरू मुख्य मेनूहरूमा वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ।
गोथिक अल्ट्रा ओटी
LaPointe को रोड
राजा र रानी
एक फेल स्वीप
एडिन किर्नबर्ग स्क्रिप्ट
के तपाईंले आफ्नो दृश्य र कर्पोरेट पहिचान परियोजनाहरूमा कुनै हस्तलिखित फन्टहरू प्रयोग गर्नुभयो? मलाई बताउनुहोस् टिप्पणी सेक्सन र यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने तपाईंको काम हामीसँग साझा गर्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » Fuentes » २ call सुलेख फन्टहरू
उत्कृष्ट मैले पहिले नै यी प्रकारका स्रोतहरूबाट खोजी गर्न थाकेको थिएँ, धेरै धेरै धन्यवाद।
उत्कृष्ट, म केहि विवाहको निम्ताहरू बनाउँदैछु र यो उत्तम छ, धेरै धेरै धन्यवाद
Rodarte लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले माया गरेँ
Tg लाई जवाफ दिनुहोस्
चयनको लागि धन्यबाद तर गुणात्मक सर्तहरूमा त्यहाँ केहि बाँकी छ ... म तपाईंलाई टाइपोग्राफीको डिजाइनर र प्रेमीको रूपमा भन्छु।
Vanhalex लाई जवाफ दिनुहोस्
उत्कृष्ट !! धन्यबाद।
नियममा प्रतिक्रिया दिनुहोस्